Spotify သည်သုံးစွဲသူသန်း ၁၄၀ ရှိပြီးဖြစ်သည် Gadget သတင်း
Elvis bucatariu | | လွှ
ဂီတ streaming ပလက်ဖောင်း Spotify သည်၎င်းထက်ပိုသောအရာများကိုမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည် သန်း ၁၅၀ သုံးစွဲသူပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Tim Cook မှသူ၏ Apple Music platform အတွက်ကြေငြာခဲ့သောပမာဏထက်ကျော်လွန်နေပါသည် 27 သန်း subscriber များအား.
Spotify ၏တရားဝင်ကြေငြာချက်တွင်ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီ၏ဒုတိယ ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဌာနအကြီးအကဲ Brian Benedik ကအောင်မြင်မှုအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
"လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကကြော်ငြာကိုအခြေခံတဲ့ Spotify ရဲ့အခမဲ့ဗားရှင်းကိုငါတို့စတင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတစ်နှစ်တာတိုးတက်မှု ၅၀% ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးစီးပွားရေးကအဲဒီ့အချိန်ကတည်းကအလျင်အမြန်ကြီးထွားလာတယ်။ "
အထူးသ Spotify အချို့ရောက်ရှိခဲ့သည် $ 3.300 ဘီလီယံ၏ဝင်ငွေ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 500 သန်းအမြတ်အစွန်းအဖြစ်။
၏ပမာဏပေမယ့် Spotify ၏ငွေပေးချေသူသည်သန်း ၅၀ ဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေအများစုသည်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည် ကြော်ငြာ။ ရှင်းနေသည်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပင်ဖြစ်သည် - အက်ပဲလ်၏တိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများအားလုံးရှိနေသော်လည်း Apple ကဂီတSpotify သည်ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကြုံတွေ့ရရုံသာမက၊ Apple platform တွင်ယခင်ကသီးသန့်အနုပညာရှင်အချို့သည်မကြာသေးမီကပင် Spotify သို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် တေလာဆွစ်ဖ်အမှု.
သုံးစွဲသူများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်လက်ရှိသုံးစွဲသူများအားပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရေးကိုဆက်လက်တိုးချဲ့ရန် Spotify မှပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ထပ်သင့်ရဲ့ algorithms တိုးတက်စေ။
ဂီတအသစ်များရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖွင့်စရာစာရင်းအသစ်များဖန်တီးခြင်းအတွက် algorithms နှင့်စက်လေ့လာသင်ယူခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ သင်ကမ္ဘာအနှံ့သုံးစွဲသူသန်း ၁၄၀ ရှိပါကဤသူအားလုံးအတွက်သီချင်းစာရင်းကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒီတော့ algorithms နဲ့ machine တွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုမိုထိရောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ "
ယခုအချိန်တွင် Spotify ၏အနာဂတ်အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိပ်မများသော်လည်း၎င်းသည် Premium subscription ၏ပိုမိုကောင်းမွန်သော version ကိုကမ်းလှမ်းနိုင်မည်ဟုယုံကြည်သော်လည်း၎င်းသည် အသံအရည်အသွေးမြင့်မားသောအသံ (ဟိုင်ဖိုင်) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » လွှ » Spotify သည်သုံးစွဲသူသန်း ၁၄၀ ရှိပြီးဖြစ်သည်